New Zealand oo mamnuucaysa qoryaha darandooriga u dhaca
New Zealand ayaa mamnuucaysa dhammaan qoryaha darandooriga u dhaca ee loo adeegsaday weerarkii lagu qaaday Muslimiinta ku cibaadaysanayay masaajidda magaalada Christchurch, sida ay sheegtay Ra’iisulwasaaraha New Zealand Jacinda Ardern.
Shuruucda qoryaha ee dalkaas ayaa miiska saarnaa tan iyo markii Jimcihii hore lagu laayay 50 ruux oo ku sugnaa labo masaajid.
Jacinda ayaa sheegtay in ay rajaynayso in sharciga cusub uu dhaqan galo 11 bisha Abriil.
Dhammaan dadkii ku dhintay labada masaajid ayaa hadda si rasmi ah loo aqoonsaday sida uu sheegay taliyaha booliiska Mike Bush. Hal nin ayaa lagu soo oogay hal dacwad oo dil ah.
Brenton Tarrant oo reer Australia ah oo iskii isugu sheegay in uu caddaanimada ku kalax tagay ayaa la filayaa in dacwado dheeri ah lagu soo oogo.
Sannadkii 2017kii ayuu dalka New Zealand ka helay ruqsadda qoriga lagu haysan karo.
“Bishan Maarso 15keedii taariikhdanada isbadal abidkii jiri doona ayaa ku dhacay, shuruucdanaduna sidaas oo kale ayay isu badali doonaan, ayay tiri Ra’iisulwasaaraha oo weerarkan ku tilmaantay mid argagixiso.
“Iyadoo lix maalmood laga joogo weerarkaas waxaan ku dhawaaqaynaa mamnuucitaanka dhammaan hubka loo qaabeeyay in ay milatarigu adeegsadaan ee magacooda afka qalaad loogu soo gaabiyo (MSSA) iyo kuwo kale oo ka agdhaw oo darandoori u dhici kara.”
“Qaybaha lagu casriyayn karo qoryaha ee loogu badali karo in ay daran doori u dhacaan ayaa sidoo kale la mamnuuci doonaa”
Ra’iisulwasaaraha ayaa sheegtay in dadka hadda haysta hubka la mamnuucay loo ogolaan doono in ay iska soo celiyaan oo dhaqaale loo celiyo.
Ardern waxay sheegtay in dadka loo celin doono inta u dhaysa 1,000 ilaa 200milyan oo doolar. Waxay sheegtay in ay dawladda waajib ku tahay bixiso kharashkaas si loo xaqiijiyo ammaanka bulshada.
Cunsurigii Muslimiinta ku laayay New Zealand oo Maxkamad lasoo taagey
Caalamka 16.03.2019. 12:38
Madaxda caalamka oo uu kamid yahay Trump ayaa ku tilmaamay weerarka mid fooxun.
Erdogan oo dalbaday in la dilo ninkii Muslimiinta ku laayay New Zealand
Caalamka 20.03.2019. 15:38
Khasaaraha dhimasho ee weerarka Masjidka New Zealand oo korodhay
Caalamka 17.03.2019. 07:47
"Waxay kasoo carareen colaad, waxaana lagu dilay Masjid dhexdiisa"
Caalamka 16.03.2019. 20:48
Sacuudiga oo Xajka ku martisooraya qoysaska Muslimiinta lagu laayey NZ
Caalamka 17.07.2019. 08:52